प्रचण्ड, बाबुराम, देउवासहितका नेताका पिएको तलब रोकियो
प्रचण्ड, बाबुराम, देउवासहितका नेताका पिएको तलब रोकियो
सोमबार २८, माघ २०७५
काठमाडौ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ४४ जना सांसदका पिएको तलब दुई महिनादेखि रोकिएको छ ।
बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नगराएपछि संसद् सचिवालयले तलब रोकेको हो । ३३४ मध्ये २६२ सांसदका पिएको तलब भने उनीहरूकै खातामा जान थालेको छ ।
पहिले पिएको तलब सांसदहरूकै खातामा जाने गरेको थियो । अहिले सचिवालयले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि प्रायःले बैंक खाता नम्बर बुझाएका छन् ।
२५ मन्त्री र फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीको पारिश्रमिक भने सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्दैन ।
बैंक खाता नम्बर सचिवालयलाई उपलब्ध नभएकाले पारिश्रमिक रोकिएको होे । पिएहरुले भने व्यस्तताको कारण बैंक खाता नम्बर बुझाउन नसकेको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईका स्वकीय सचिव रोशन पोखरेलले आफ्नो नागरिकता हराएकाले बैंक खाता खोल्न नसकेको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसहित अमृता थापा, जीवनराम श्रेष्ठ, टेकबहादुर बस्नेत, धर्मशिला चापागाईं, नवीना लामा, पूर्णाकुमारी सुवेदी, मैनाकुमारी भण्डारी, रामकुमारी झाँक्री, रेखा कुमारी, शिवकुमार मण्डलको पिएको तलब रोकिएको छ ।
नेकपाकै सत्या पहाडी, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, कोमल वली, परशुराम मेघी गुरुङ, राजकुमार कुँवर, शान्तिकुमारी अधिकारी र हरिचरण सिवाकोेटीका पिएको पनि तलब रोकिएको छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, जयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, उमाकान्त चौधरी, कर्मा घले, जिपछिरिङ लामा, देवेन्द्रराज कँडेल, नागेन्द्र कुमार, डा।नारायण खड्का, पद्मनारायण चौधरी, प्रकाशमान सिंह, विमला नेपाली, मीना पाण्डे, देवी आले राना र दुर्गाप्रसाद उपाध्यायका पिएको पनि तलब रोकिएको छ ।
फोरमका प्रदीप यादव, रेनुकुमारी यादव, डा. सूर्यनारायण यादव, हरिनारायणप्रसाद रौनियार र रामप्रीत पासवानका पिएको तलब रोकिएको हो । राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन र राजपाका महेन्द्र राय यादवका पिएको पनि तलब रोकिएको छ ।